တိုင်းပြည်၏အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာရှိပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှုကသာလျင် ယနေ့ နိုင်ငံ၏ ပကတိလိုအပ် ချက်ဖြစ်သော တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မည် » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၉
တိုင်းပြည်၏အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာရှိပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှုကသာလျင် ယနေ့ နိုင်ငံ၏ ပကတိလိုအပ် ချက်ဖြစ်သော တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မည်
မွနျမာနိုငျငံ၏သမိုငျးတှငျ မိမိတို့သညျ သကျဆိုငျရာကဏ်ဍအသီးသီးမှ အမိ မွနျမာနိုငျငံတျောကွီး တိုးတကျရေး အတှကျ ဆောငျရှကျခဲ့ကွပါကွောငျး၊ ယုံကွညျမှု၊ သဒ်ဓါ သညျကပငျ စညျးလုံးညီညှတျသညျ့စှမျးအား၊ စညျးလုံး ညီညှတျသညျ့ ရဲစှမျးသတ်တိကို ဖွဈပျေါစမေညျဖွဈပါကွောငျး၊ တိုငျးပွညျ၏အားသညျ ပွညျတှငျးမှာသာ ရှိပါကွောငျး၊ စညျးလုံးညီညှတျမှုကသာလငျြ မိမိတို့မွနျမာ့လူ့ဘောငျအဖှဲ့အစညျးက မြှျောလငျ့နသေညျ့ ယနေ့ နိုငျငံ၏ ပကတိလိုအပျခကျြဖွဈသော တညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ စညျးလုံးညီညှတျရေး နှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကို ဆောငျကွဉျးနိုငျမညျ ဖွဈပါကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက ဟိန်ဒူရိုးရာပှဲတျောမြားတှငျ အထှဋျမွတျဆုံး ပှဲတျောဖွဈသညျ့ ဒီပါဝလီနေ့ အထိမျးအမှတျဂုဏျပွုညစာစားပှဲသို့ တကျရောကျဂုဏျပွု အမှာစကားပွောကွားစဉျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုညစာစားပှဲအခမျးအနားကို မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံသံရုံး နှငျ့ မွနျမာ-အိန်ဒိယ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာစီးပှားရေးလုပျငနျးအသငျးခြုပျတို့မှ ကွီးမှူး၍ ယနညေ့ပိုငျးတှငျ ရနျကုနျမွို့၊ မင်ျဂလာတောငျ ညှနျ့မွို့ နယျရှိ Wyndham Grand Hotel တှငျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျ မှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ၊ ဇနီး ဒျေါကွူကွူလှနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး နှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောနှငျ့ ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး မှတပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရ အဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူမြား၊ ရနျကုနျတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူးနှငျ့ဇနီး၊ မွနျမာနိုငျငံရှိ နိုငျငံခွား သံရုံးမြားမှ သံအမတျကွီးမြားနှငျ့ သံတမနျမြား၊ ဘာသာပေါငျး စုံခဈြကွညျညီညှတျရေး ဗဟိုအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသောငျးထိုကျ၊ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ဟိန်ဒူဘာသာရေး ဗဟို အဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးနန်ဒ၊ မွနျမာ-အိန်ဒိယ အပွညျပွညျဆိုငျရာ စီးပှားရေးလုပျငနျးအသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇျောဇျောနိုငျနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား ၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာကုနျသညျမြား၊ ဟိန်ဒူရိုးရာယဉျကြေးမှု အကအဖှဲ့မြားနှငျ့ ဖိတျကွားထားသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ၊ ဇနီးနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ဂုဏျပွုညစာစားပှဲပွုလုပျမညျ့ Wyndham Grand Hotel သို့ရောကျရှိကွရာ ဟိန်ဒူရိုးရာ ဒီပါဝလီပှဲတျော ကငျြးပရေးကျောမတီဥက်ကဋ်ဌမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူ မြား က ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွ သညျ။
အစီအစဉျအရ ဒီပါဝလီနေ့ အထိမျးအမှတျဂုဏျပွုညစာစားပှဲကို တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျ မှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ဇနီး၊ မွနျမာ-အိန်ဒိယ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာ စီးပှားရေးလုပျငနျးအသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇျောဇျောနိုငျနှငျ့ဇနီး၊ သနန်တနဓမ်မပါလက (ဟိန်ဒူ)အဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဘာဂနျြရာမျလာလျရှာရမားတို့က ဖဲကွိုးဖွတျဖှငျ့လှဈပေး ကွသညျ။ ဆကျလကျ၍ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ (ရေ)နှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ)ဇနီး၊ မွနျမာ-အိန်ဒိယ အပွညျပွညျဆိုငျရာ စီးပှားရေး လုပျငနျးအသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ဇနီး၊ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ဟိန်ဒူဘာသာရေးဗဟိုအဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ ဒျေါမီးမီး တို့က ဒီပါဝလီအထိမျးအမှတျ ဆီမီးထှနျးညှိပေးကွပွီး အမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကူးကွသညျ။ ထို့နောကျ မွနျမာ-အိန်ဒိယ အပွညျပွညျဆိုငျရာ စီးပှားရေး လုပျငနျးအသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇျောဇျောနိုငျ က ကွိုဆိုနှုတျခှနျး ဆကျစကား ပွောကွားပွီး ဟိန်ဒူဆရာဝနျမြားအသငျး ဥက်ကဋ်ဌအငွိမျးစား ဆရာဝနျကွီး ဒေါကျတာမငျးလှငျနှငျ့ မွနျမာ နိုငျငံဂျေါရခါးအသငျး ဥက်ကဋ်ဌဟောငျး ဦးကြျောလေးတို့က ဒီပါဝလီနနှေ့ငျ့ ပတျသကျသညျ မြားကို ရှငျးလငျးတငျပွကွသညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ဂုဏျပွုအမှာစကား ပွောကွား ရာတှငျ ဟိန်ဒူဘာသာဝငျမြား၏ ဘာသာရေး နထေူ့းနမွေ့တျဖွဈသညျ့ ဒီပါဝလီနေ့ ဂုဏျပွုညစာစားပှဲသို့ တကျရောကျလာကွသူမြားအားလုံး သကျဆိုငျရာဘာသာတရား မြား၏ အဆုံးအမကွောငျ့ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမျြးကွပါစကွေောငျး၊ ညီရငျးအကို၊ မောငျနှမရငျးခြာမြားကဲ့သို့ မတ်ေတာတရားပှားမြားနိုငျကွပါစကွေောငျး၊ မိမိတို့သညျ မညျသညျ့ဘာသာ၊ မညျသညျ့အယူဝါဒကို ကိုးကှယျယုံကွညျကွသညျဖွဈစေ ဘာသာတရားတိုငျး၏ အဆုံးအမသညျ လူသား အခငျြးခငျြး တဈဦးကိုတဈဦး မတ်ေတာထားကွရနျ၊ ယုံကွညျကွရနျနှငျ့ အမြားကောငျးကြိုးကို သယျပိုးကွရနျ တိုကျတှနျးအားပေးသညျ့ အဆုံးအမမြားပငျဖွဈကွောငျး၊ လောကကောငျးကြိုး၊ လူသားကောငျးကြိုးသယျပိုး နိုငျရနျအတှကျ မိမိတို့၏ ကိုယျ၊ စိတျ၊ နှလုံး သုံးပါးစလုံး၌ ထားရှိလိုကျနာကငျြ့ကွံနထေိုငျ သငျ့သညျမြားကို ဆိုဆုံးမထားသညျ့ အဆုံးအမမြားပငျ ဖွဈကွောငျး။
သဒ်ဓါသညျ ရဲစှမျးသတ်တိ၊ ယုံကွညျခကျြသညျ ရဲစှမျးသတ်တိကို ဖွဈစသေညျ (Belief is Courage) ဟုမှတျသားခဲ့ဖူးပါကွောငျး၊ “သမ်မဂါနံ၊ တပေါ သုခေါ” ညီညှတျခွငျး သညျ ခမျြးသာခွငျးသုခကို ပေးစသေညျဟု ယုံကွညျပါကွောငျး၊ မိမိတို့သညျ ကိုးကှယျ ယုံကွညျမှု မညျသို့ပငျကှဲပွားသညျဖွဈစေ မွနျမာနိုငျငံ တညျးဟူသော နိုငျငံတှငျ နှဈပေါငျး ကွာရှညျစှာ စညျးလုံးညီညှတျမှုကို အရငျးခံပွီး အေးအတူ၊ ပူအမြှ လကျတှဲနထေိုငျခဲ့ကွ သူမြားပငျဖွဈကွောငျး၊ တဈမွတေညျးနေ၊ တဈရတေညျးသောကျ၊ တဈလတေညျးရှူ၍ နထေိုငျခဲ့ကွပွီး လကျရှိတှငျလညျးအတူတကှနထေိုငျကွဆဲပငျဖွဈကွောငျး၊ ယငျးသို့ နထေိုငျကွရာတှငျ ကြှနျတျောတို့အားလုံးသညျ မွနျမာဖွဈသညျဆိုသညျ့စိတျကို ယုံကွညျ မှေးမွူကွရနျလိုကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ ၏သမိုငျးတှငျ မိမိတို့သညျ သကျဆိုငျရာကဏ်ဍ အသီးသီးမှ အမိမွနျမာနိုငျငံတျောကွီး တိုးတကျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျခဲ့ကွပါကွောငျး၊ ယုံကွညျမှု၊ သဒ်ဓါ သညျကပငျ စညျးလုံးညီညှတျသညျ့စှမျးအား၊ စညျးလုံးညီညှတျ သညျ့ ရဲစှမျးသတ်တိကို ဖွဈပျေါစမေညျဖွဈပါကွောငျး၊ စညျးလုံးညီညှတျမှုကသာလငျြ မိမိတို့ မွနျမာ့လူ့ဘောငျ အဖှဲ့အစညျးက မြှျောလငျ့နသေညျ့ ယနနေို့ငျငံ၏ ပကတိလိုအပျခကျြ ဖွဈသော တညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ စညျးလုံးညီညှတျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကို ဆောငျ ကွဉျးနိုငျမညျဖွဈပါကွောငျး။
မိမိတို့နိုငျငံ၏ ကဏ်ဍတိုငျးတှငျ စညျးလုံးညီညှတျကွရနျလိုအပျပွီး စညျးလုံးသညျကို “ညီညှတျသညျ၊ ပူးပေါငျးသညျ”ဟု အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုကွပါကွောငျး၊ စညျးလုံးခွငျး၏ အကွောငျးတရားသညျ စညျးရုံးခွငျးပငျဖွဈပွီး စညျးရုံးခွငျးကို “စုပေါငျးဖှဲ့စညျးသညျ” ဟု အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုထားပါကွောငျး၊ စုပေါငျးဖှဲ့စညျးနိုငျရနျအတှကျ တဈဦးနှငျ့တဈဦး၊ တဈဖှဲ့နှငျ့တဈဖှဲ့၊ အသငျးတဈသငျးနှငျ့ တဈသငျးကွားတှငျ မိမိအထကျတှငျ ဆိုခဲ့သညျ့ ယုံကွညျမှုနှငျ့ သံယောဇဉျတရားလိုအပျပါကွောငျး၊ ယုံကွညျမှုနှငျ့ သံယောဇဉျကို ထိတှေ့ ဆကျဆံခွငျးကသာ ရရှိနိုငျမညျဖွဈပါကွောငျး၊ မိမိတို့နထေိုငျရာ မိခငျနိုငျငံကွီး၏ အမြိုး သားယဉျကြေးမှုစရိုကျလက်ခဏာမြားကို တနျဖိုးထား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈပါကွောငျး၊ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုအခြို့သညျ ဟိန်ဒူယဉျကြေးမှုနှငျ့ နှီးနှယျနသေညျကို သိရှိကွ ပွီး ဖွဈပါကွောငျး၊ စိတျတူ၊ သဘောတူဖွဈမှုသညျ ခိုငျမာမှုကိုရရှိစပွေီး အားကို ဖွဈစေ ပါကွောငျး၊ တိုငျးပွညျ၏အားသညျ ပွညျတှငျးမှာသာရှိပါကွောငျး၊ ထို့အတူ အခွားညီနောငျ ဘာသာ ဝငျမြားနှငျ့လညျး အတူပူးပေါငျးလကျတှဲဆောငျရှကျကွရမညျဖွဈကွောငျး၊ ယနေ့ မိမိတို့သညျ အခွခေံအကြ ဆုံးလိုအပျခကျြကို ကိုယျစှမျးÍာဏျစှမျးရှိသရှေ့ ဖွညျ့ဆညျးနေ ကွပါကွောငျး၊ မိမိတို့ညီညှတျမှ မိမိတို့နိုငျငံ တိုးတကျမညျဖွဈပွီး နိုငျငံတိုးတကျမှသာလငျြ သကျဆိုငျရာ ကိုးကှယျရာဘာသာအသီးသီး တညျတံ့ခိုငျမွဲဖှံ့ ဖွိုးမညျဖွဈပါကွောငျး။
“ဒီပါဝလီ” ပှဲတျောသညျ “ဒီပအဝါလီ” ဆိုသညျ့ စကားမှတဈဆငျ့ ဆငျးသကျလာ ပွီး ဒီပ = ဆီမီး၊ အဝါလီ = စီတနျးခွငျး ဖွဈသညျ့အတှကျ ဆီမီးမြားကို ညီညာစှာ ထှနျးညှိပူဇျောခွငျးဖွဈသညျဟု မှတျသားရပါကွောငျး၊ ဆီမီးဆိုသညျမှာ အမှောငျကို ခှငျး၍ အလငျးဆောငျခွငျးပငျဖွဈကွောငျး၊ ယခုလို နထေူ့းနမွေ့တျကို တကျရောကျလာကွသူ မြားအားလုံးကလညျး မိမိတို့ မွနျမာ့လူ့အဖှဲ့အစညျး၏ အလငျးကို ဖျောဆောငျနိုငျရနျ အတှကျ စညျးလုံးခွငျးဆီမီးကို ထှနျးညှိပွီး စညျးရုံးညီညှတျစှာဖွငျ့ မွနျမာ့အကြိုးကို သယျ ပိုးဆောငျရှကျ သှားကွပါစလေိုကွောငျးဖွငျ့ ဆန်ဒပွုပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ အိန်ဒိယနိုငျငံသံရုံးမှဟိန်ဒူရိုးရာယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားက အကပဒသောမြား၊ မွနျမာသမီးပြိုလေး မြားက ဆီမီးအကတို့ဖွငျ့ဖြျောဖွတေငျ ဆကျခဲ့ကွသညျ။
ဖြျောဖွတေငျဆကျမှုအပွီးတှငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံသံရုံးမှ သံရုံး ဒုတိယအကွီးအကဲနှငျ့ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာရုရှားနိုငျငံသံအမတျကွီးတို့က အမှတျတရ စကားမြား ပွောကွားရာတှငျ အိန်ဒိယနိုငျငံသံရုံး၊ ဒုတိယအကွီးအကဲ Dr. Sumit Septh က ယခုကဲ့သို့ ဒီပါဝလီပှဲတျောဖွဈမွောကျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျ ခဲ့ကွသူမြား အားလုံးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံနှငျ့ အရှအေ့နောကျ ထိစပျ ဆကျစပျနပွေီး ဆကျဆံရေး၊ မူဝါဒမြားအဓိကတူညီကွကွောငျးနှငျ့ ပိုမိုခိုငျမာသော နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေး သညျ မိမိတို့နိုငျငံရှိ ပွညျသူမြားအတှကျ ကောငျးမှနျမှုကို ဖွဈစပေါကွောငျးဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာရုရှားနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Dr. Nikolay LISTOPADOV က တကျရောကျ လာကွသူမြားအားလုံးကို လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ၊ နှေးနှေးထှေးထှေးဂုဏျပွုပါကွောငျး၊ မိမိသညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျ သညျမှာ ကာလကွာရှညျပွီဖွဈပါကွောငျး၊ အိန်ဒိယနိုငျငံနှငျ့နီပေါနိုငျငံတို့တှငျလညျး တာဝနျ ထမျးဆောငျခဲ့ပါကွောငျး၊ သုံးနိုငျငံလုံးတှငျ ဗုဒ်ဓဘာသာနှငျ့ ဟိန်ဒူဘာသာတို့ ထှနျးကား သညျကို တှရှေိ့ရပါကွောငျး၊ အနာဂတျ တှငျနိုငျငံသုံးနိုငျငံလုံးရှိ ဘာသာဝငျမြားအားလုံး ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြး နထေိုငျကွစရေေး မတ်ေတာပို့သပါကွောငျး၊ ဒီပါဝလီပှဲတျောသညျ အရေးကွီးသညျ့ပှဲတျောဖွဈပွီး ဂုဏျပွုသညျ့အနဖွေငျ့ပွောရမညျဆိုပါက “ခဈြစကိုရှညျစေ၊ မုနျးစကိုတိုစေ”ဟု ပွောကွားလိုကွောငျးနှငျ့ ကွှရောကျလာကွသူမြားအားလုံး ကိုယျစိတျ နှဈဖွာ ရှငျလနျးခမျြး မွပေ့ါစဟေု မတ်ေတာပို့သပါကွောငျးဖွငျ့လညျးကောငျး မွနျမာ ဘာသာစကားဖွငျ့ အမှတျတရစကားမြား အသီးသီးပွောကွားကွသညျ။ ယငျးနောကျ မွနျမာ-အိန်ဒိယ အပွညျပွညျဆိုငျရာ စီးပှားရေးလုပျငနျးအသငျးခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇျောဇျောနိုငျ က ကြေးဇူးတငျစကားပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ ဇနီးတို့က ဖြျောဖွေ တငျဆကျခဲ့ကွသညျ့ ဟိန်ဒူရိုးရာ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားအား အမှတျတရဂုဏျပွုပနျးခွငျးပေးအပျပွီး အမှတျတရ စုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျကွကာ ဂုဏျပွု ညစာကို အတူတကှ သုံးဆောငျခဲ့ကွသညျ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင် မိမိတို့သည် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးမှ အမိ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး တိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ယုံကြည်မှု၊ သဒ္ဓါ သည်ကပင် စည်းလုံးညီညွတ်သည့်စွမ်းအား၊ စည်းလုံး ညီညွတ်သည့် ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၏အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိပါကြောင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကသာလျင် မိမိတို့မြန်မာ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းက မျှော်လင့်နေသည့် ယနေ့ နိုင်ငံ၏ ပကတိလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဟိန္ဒူရိုးရာပွဲတော်များတွင် အထွဋ်မြတ်ဆုံး ပွဲတော်ဖြစ်သည့် ဒီပါဝလီနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ဂုဏ်ပြု အမှာစကားပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံး နှင့် မြန်မာ-အိန္ဒိယ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းချုပ်တို့မှ ကြီးမှူး၍ ယနေ့ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာတောင် ညွန့်မြို့ နယ်ရှိ Wyndham Grand Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှနှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး မှတပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့်ဇနီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြား သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံတမန်များ၊ ဘာသာပေါင်း စုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထိုက်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဟိန္ဒူဘာသာရေး ဗဟို အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒ၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်များ၊ ဟိန္ဒူရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကအဖွဲ့များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ဇနီးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲပြုလုပ်မည့် Wyndham Grand Hotel သို့ရောက်ရှိကြရာ ဟိန္ဒူရိုးရာ ဒီပါဝလီပွဲတော် ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများနှင့် တာဝန်ရှိသူ များ က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြ သည်။
အစီအစဉ်အရ ဒီပါဝလီနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲကို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နိုင်နှင့်ဇနီး၊ သနန္တနဓမ္မပါလက (ဟိန္ဒူ)အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘာဂျန်ရာမ်လာလ်ရှာရမားတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေး ကြသည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ)နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဇနီး၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဇနီး၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဟိန္ဒူဘာသာရေးဗဟိုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒေါ်မီးမီး တို့က ဒီပါဝလီအထိမ်းအမှတ် ဆီမီးထွန်းညှိပေးကြပြီး အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြသည်။ ထို့နောက် မြန်မာ-အိန္ဒိယ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နိုင် က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်း ဆက်စကား ပြောကြားပြီး ဟိန္ဒူဆရာဝန်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌအငြိမ်းစား ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းလွင်နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံဂေါ်ရခါးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးကျော်လေးတို့က ဒီပါဝလီနေ့နှင့် ပတ်သက်သည် များကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုအမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ၏ ဘာသာရေး နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သည့် ဒီပါဝလီနေ့ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသူများအားလုံး သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရား များ၏ အဆုံးအမကြောင့် နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေကြောင်း၊ ညီရင်းအကို၊ မောင်နှမရင်းချာများကဲ့သို့ မေတ္တာတရားပွားများနိုင်ကြပါစေကြောင်း၊ မိမိတို့သည် မည်သည့်ဘာသာ၊ မည်သည့်အယူဝါဒကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်စေ ဘာသာတရားတိုင်း၏ အဆုံးအမသည် လူသား အချင်းချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မေတ္တာထားကြရန်၊ ယုံကြည်ကြရန်နှင့် အများကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုးကြရန် တိုက်တွန်းအားပေးသည့် အဆုံးအမများပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လောကကောင်းကျိုး၊ လူသားကောင်းကျိုးသယ်ပိုး နိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့၏ ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံး သုံးပါးစလုံး၌ ထားရှိလိုက်နာကျင့်ကြံနေထိုင် သင့်သည်များကို ဆိုဆုံးမထားသည့် အဆုံးအမများပင် ဖြစ်ကြောင်း။
သဒ္ဓါသည် ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ယုံကြည်ချက်သည် ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဖြစ်စေသည် (Belief is Courage) ဟုမှတ်သားခဲ့ဖူးပါကြောင်း၊ “သမ္မဂါနံ၊ တပေါ သုခေါ” ညီညွတ်ခြင်း သည် ချမ်းသာခြင်းသုခကို ပေးစေသည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့သည် ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု မည်သို့ပင်ကွဲပြားသည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံ တည်းဟူသော နိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ကြာရှည်စွာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အရင်းခံပြီး အေးအတူ၊ ပူအမျှ လက်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြ သူများပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်မြေတည်းနေ၊ တစ်ရေတည်းသောက်၊ တစ်လေတည်းရှူ၍ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး လက်ရှိတွင်လည်းအတူတကွနေထိုင်ကြဆဲပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ နေထိုင်ကြရာတွင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် မြန်မာဖြစ်သည်ဆိုသည့်စိတ်ကို ယုံကြည် မွေးမြူကြရန်လိုကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ၏သမိုင်းတွင် မိမိတို့သည် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ အသီးသီးမှ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး တိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ယုံကြည်မှု၊ သဒ္ဓါ သည်ကပင် စည်းလုံးညီညွတ်သည့်စွမ်းအား၊ စည်းလုံးညီညွတ် သည့် ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကသာလျင် မိမိတို့ မြန်မာ့လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းက မျှော်လင့်နေသည့် ယနေ့နိုင်ငံ၏ ပကတိလိုအပ်ချက် ဖြစ်သော တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင် ကြဉ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် စည်းလုံးညီညွတ်ကြရန်လိုအပ်ပြီး စည်းလုံးသည်ကို “ညီညွတ်သည်၊ ပူးပေါင်းသည်”ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြပါကြောင်း၊ စည်းလုံးခြင်း၏ အကြောင်းတရားသည် စည်းရုံးခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး စည်းရုံးခြင်းကို “စုပေါင်းဖွဲ့စည်းသည်” ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါကြောင်း၊ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့၊ အသင်းတစ်သင်းနှင့် တစ်သင်းကြားတွင် မိမိအထက်တွင် ဆိုခဲ့သည့် ယုံကြည်မှုနှင့် သံယောဇဉ်တရားလိုအပ်ပါကြောင်း၊ ယုံကြည်မှုနှင့် သံယောဇဉ်ကို ထိတွေ့ ဆက်ဆံခြင်းကသာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နေထိုင်ရာ မိခင်နိုင်ငံကြီး၏ အမျိုး သားယဉ်ကျေးမှုစရိုက်လက္ခဏာများကို တန်ဖိုးထား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအချို့သည် ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုနှင့် နှီးနွယ်နေသည်ကို သိရှိကြ ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စိတ်တူ၊ သဘောတူဖြစ်မှုသည် ခိုင်မာမှုကိုရရှိစေပြီး အားကို ဖြစ်စေ ပါကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၏အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာရှိပါကြောင်း၊ ထို့အတူ အခြားညီနောင် ဘာသာ ဝင်များနှင့်လည်း အတူပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ မိမိတို့သည် အခြေခံအကျ ဆုံးလိုအပ်ချက်ကို ကိုယ်စွမ်းÍာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ ဖြည့်ဆည်းနေ ကြပါကြောင်း၊ မိမိတို့ညီညွတ်မှ မိမိတို့နိုင်ငံ တိုးတက်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတိုးတက်မှသာလျင် သက်ဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအသီးသီး တည်တံ့ခိုင်မြဲဖွံ့ ဖြိုးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
“ဒီပါဝလီ” ပွဲတော်သည် “ဒီပအဝါလီ” ဆိုသည့် စကားမှတစ်ဆင့် ဆင်းသက်လာ ပြီး ဒီပ = ဆီမီး၊ အဝါလီ = စီတန်းခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ဆီမီးများကို ညီညာစွာ ထွန်းညှိပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားရပါကြောင်း၊ ဆီမီးဆိုသည်မှာ အမှောင်ကို ခွင်း၍ အလင်းဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလို နေ့ထူးနေ့မြတ်ကို တက်ရောက်လာကြသူ များအားလုံးကလည်း မိမိတို့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အလင်းကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် စည်းလုံးခြင်းဆီမီးကို ထွန်းညှိပြီး စည်းရုံးညီညွတ်စွာဖြင့် မြန်မာ့အကျိုးကို သယ် ပိုးဆောင်ရွက် သွားကြပါစေလိုကြောင်းဖြင့် ဆန္ဒပြုပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးမှဟိန္ဒူရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များက အကပဒေသာများ၊ မြန်မာသမီးပျိုလေး များက ဆီမီးအကတို့ဖြင့်ဖျော်ဖြေတင် ဆက်ခဲ့ကြသည်။
ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးမှ သံရုံး ဒုတိယအကြီးအကဲနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့က အမှတ်တရ စကားများ ပြောကြားရာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံး၊ ဒုတိယအကြီးအကဲ Dr. Sumit Septh က ယခုကဲ့သို့ ဒီပါဝလီပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အရှေ့အနောက် ထိစပ် ဆက်စပ်နေပြီး ဆက်ဆံရေး၊ မူဝါဒများအဓိကတူညီကြကြောင်းနှင့် ပိုမိုခိုင်မာသော နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး သည် မိမိတို့နိုင်ငံရှိ ပြည်သူများအတွက် ကောင်းမွန်မှုကို ဖြစ်စေပါကြောင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာရုရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay LISTOPADOV က တက်ရောက် လာကြသူများအားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ၊ နွေးနွေးထွေးထွေးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ မိမိသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် သည်မှာ ကာလကြာရှည်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်နီပေါနိုင်ငံတို့တွင်လည်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ သုံးနိုင်ငံလုံးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာတို့ ထွန်းကား သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ အနာဂတ် တွင်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံလုံးရှိ ဘာသာဝင်များအားလုံး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်ကြစေရေး မေတ္တာပို့သပါကြောင်း၊ ဒီပါဝလီပွဲတော်သည် အရေးကြီးသည့်ပွဲတော်ဖြစ်ပြီး ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်ပြောရမည်ဆိုပါက “ချစ်စကိုရှည်စေ၊ မုန်းစကိုတိုစေ”ဟု ပြောကြားလိုကြောင်းနှင့် ကြွရောက်လာကြသူများအားလုံး ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းချမ်း မြေ့ပါစေဟု မေတ္တာပို့သပါကြောင်းဖြင့်လည်းကောင်း မြန်မာ ဘာသာစကားဖြင့် အမှတ်တရစကားများ အသီးသီးပြောကြားကြသည်။ ယင်းနောက် မြန်မာ-အိန္ဒိယ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နိုင် က ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီးတို့က ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ခဲ့ကြသည့် ဟိန္ဒူရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များအား အမှတ်တရဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းပေးအပ်ပြီး အမှတ်တရ စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြကာ ဂုဏ်ပြု ညစာကို အတူတကွ သုံးဆောင်ခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဟိန္ဒူရိုးရာပွဲတော်များတွင် အထွဋ်မြတ်ဆုံးပွဲတော်ဖြစ်သည့် ဒီပါဝလီနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြား (ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗထူးတပ်နယ်ရှိ တပ်မတော်(ကြည်း)တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း(ဗထူး)နှင့် တပ်မတော်အရာခံနှင့်အကြပ်ကြီးသင်ကျောင်းရှိ နည်းပြအရာရှိများ၊ သင်တန်းသားအရာရှိ၊ စစ်သည်များအား သီခြားစီတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ တာချီလိတ်မြို့ နဂါးနှစ်ကောင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီး၏ သက်တော်(၉၀)ပြည့်၊ ဝါတော်(၇၀)ပြည့် ဝိဇာတပူဇာ မွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနား တက်ရောက် (ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၈ Admin 0